I-Smartfile: I-Whitelabel isisombululo sakho esikhulu sefayile | Martech Zone
I-Smartfile: I-Whitelabel isisombululo sakho esikhulu seFayile
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 19, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJohn Hurley
Nokuba uqala ishishini elitsha, okanye usungula imveliso entsha, umbuzo wokuqala omele ukuwubuza ngulo, "Ngubani intengiso yam / umthengi wam"? Izandi zilula, akunjalo? Ngaphambi kokuba ndifike kwinxalenye malunga nokusilela kwethu ukuwuphendula ngokuchanekileyo loo mbuzo, mandikunike ibala lam lesibini lezivakalisi: SmartFile (yeyethu) yinkampani yokwabelana ngefayile eyilelwe ishishini. Sinikezela ngamashishini ngendlela ekhuselekileyo, enophawu lokuthumela kunye nokufumana iifayile ngokulula.
Xa saqala kwiminyaka emi-3 eyadlulayo, sasikholelwa ukuba iingcali ze-IT zaziza kungxola zisebenzise imveliso yethu. Singawenza umsebenzi wabo ube lula ngokubeka ulawulo lwabasebenzisi kunye neefayile ezandleni zabasebenzisi. Emva kokuchitha amawaka eedola, iiyure ezininzi ekurhwebeni, kwi-Adwords, nakwiifowuni ezibandayo, saqonda ukuba iingcali ze-IT yayiliqela lokugqibela labantu abafuna ukuthetha nathi… singasabhataleli mali ke. Into esasiyicela ukuba bayenze yayikukuthatha enye inxenye yomsebenzi wabo, kwaye okona kubi, bathathe "ulawulo" lwabo.
Ngaphandle kweefos zethu, abantu basayinele ukusebenzisa imveliso yethu. Njengoko besenza, saqala ukuqonda ukuba aba ayingobantu be-IT, kodwa endaweni yoko ziingcali zentengiso kule mibutho; Iingcali zentengiso zihlala zifuna ukuthumela iifayile ezinkulu kugxa wakho okanye umntu ongaphandle omkhulu kakhulu ukuba angabanjwa nge-imeyile. Nokuba aba bathengi babeyinxalenye yeshishini lamadoda amabini okanye inkampani yeFortune 500, babeyazi ukubaluleka kokubeka uphawu kuzo zonke iinkalo zeshishini labo, kubandakanya neseva ye-FTP. Emva kwayo yonke loo nto, babezingcali zentengiso! Kwaye bebengafuni ukuya kuyo yonke ired tape (kobuxhakaxhaka) nesebe labo langaphakathi le-IT ukuseta nokulawula iserver yabo ye-FTP. Babephantsi kompu, njengoko abantu abaninzi bethengisa, kwaye bafuna isisombululo esikhawulezileyo ukuhlangabezana neemfuno zabo. Ke bayenzile into esiyenzayo xa sinengxaki: chwetheza amagama aphambili kuKhangelo kwaye uvumele uGoogle asombulule. Ngombulelo ngathi, savela saxelela ukuba sinokwenza ubomi babo bube lula kancinci.
Ke umbuzo endiwufumana rhoqo yile nto isenza sahluke kuneDropbox, iBhokisi okanye iGoogle Drayivu kwaye kutheni iingcali zentengiso zisikhetha ngaphezulu kwazo? Ndiza kuqala ngeDropbox kunye neGoogle Drayivu. Ezi ziimveliso ezilungileyo, kwaye eyona ilungileyo, zisimahla! Umahluko ophambili phakathi kwabo, kwaye thina ke, kunjalo uphawu kunye nokufikelela kwabasebenzisi abaninzi. Into yokugqibela iDropbox kunye neGoogle Drayivu ziya kukuvumela ukuba uyenze kukutshintsha ilogo yabo kwaye uyibuyisele eyakho, ubuncinci ekuvumela ukuba usebenzise isizinda sakho (iifayile.yourdomain.com). Ukuba ukhathalele malunga nomfanekiso wequmrhu njengam, oku akusebenzi. Okwesibini, ezi mveliso zenzelwe umsebenzisi omnye. Umsebenzisi ngamnye kufuneka abe neakhawunti kunye nabo, emva koko unokwabelana ngefolda. Zama ukucacisa le nkqubo kwi "layman"; Into yokugqibela umntu afuna ukuyenza kukuba abe yinkxaso yezobuchwephesha.
Ngebhokisi, ufumana ukufikelela kubasebenzisi abaninzi, ukunika ingxelo, kunye nokufaka uphawu, okuvumela ukuba usebenzise ilogo yakho kunye neskimu sombala; Nangona kunjalo, ababoneleli ngenketho yokusebenzisa indawo yakho.
Olona thintelo lukhulu kubo bonke aba baboneleli bubungakanani befayile. Eyona fayile inkulu onokuyilayisha yi-2GB. Oko kunokuvakala njengefayile enkulu, kodwa akwanele ukulayisha ividiyo okanye intetho enzima yePowerPoint. Nge-SmartFile ungalayisha nayiphi na ifayile yesayizi kuyo nayiphi na isikhangeli. Ngokobuchwephesha be-savvy, sinikezela ngenkxaso epheleleyo ye-FTP.
Ke ukubuyela kubani kumthengi wethu kwaye ndithengisa njani kubo? Sifumanise ukuba yayingeyiyo isini esithile, ubudala, ishishini, okanye isebe, endaweni yoko luhlobo lomntu. Aba bantu basebenza kwihlabathi elixakekileyo kwaye bayabanjwa phakathi kokulungisa kwaye okona kubaluleke kakhulu kukukufumana ngexesha. Ukuza kwimvelaphi yentengiso andinakucinga ngomntu ohambelana nale nkcazo ngcono kunam. Ngubani owaziyo?
tags: ukuthumela ifayileifayile enkuluukuhanjiswa kwefayile enkuluifayile yefayile
UJohn uneminyaka engaphezu kwe-14 yesoftware ye-Intanethi kunye namava obunkokeli. Phambi kokuqala iSmartFile, uJohn wayengumongameli kunye nomseki-mbumba weWebexccellence, enye yeefemu ezinkulu zokuphuhlisa iwebhu eIndianapolis. UJohn usebenze neenkampani ezinje ngeDelco Remy, uluhlu luka-Angie kunye ne-NCAA ukuphuhlisa usetyenziso lwewebhu olucebileyo. Kananjalo ngelixa wayesebenza kwi-Webexcellence, uJohn wadlala indima ephambili kwisigaba sokuqalisa se-ExactTarget. Njengomongameli kunye nomsunguli we- SmartFile, UJohn iintloko zokuthengisa, ukuthengisa, kunye nophuhliso lweshishini.
Yabelana njengomfanekiso: Gqamisa, cofa kwaye wabelane ngombhalo wakho
Impendulo yakho yeNgxaki yezeMidiya yoLuntu iyonakalisa ubuGcisa bakho
Epreli 23, 2013 ngo-8: 28 AM
Konke kulungile kwaye kulungile "ukuxhobisa" abasebenzisi bakho, kodwa oloxhobiso kufuneka lubandakanye ukhuselo olusekwe kumgaqo-nkqubo ukugcina idatha ebalulekileyo yeshishini ukuba ingacinywa ngengozi okanye ngabom kuba loo datha igcinwe kuphela kumafu eenkomo, ngaphandle kwe-IT kwaye akukho mntu uxhasa ezo iifayile phezulu, naphina. Ayothuswa ngabasebenzisi bokugqibela abanolawulo kuba sinemicimbi ethile yolawulo, kodwa ngenxa yokuba sibonile, ngamava awothusayo, okwenyani yokwenene kwihlabathi liphela isixa sombhodamo lowo "uneenjongo ezintle" "Ulwazi olwaneleyo ukuba luyingozi" luzama ukusenzela umsebenzi.
Yenza i-backups ngokuzenzekelayo? Kakhulu. Ngokuzenzekelayo i-backups ngaphandle kwayo nayiphi na into yokubeka iliso ziingcali ezikhoyo? Ngokufanelekileyo, ukuzibulala ngenxa yeshishini. Umboneleli welifu uya kwenza "okusemandleni" ukukunceda, ngaphakathi kwemida yenzuzo. Nje ukuba ibe yinzuzo ngakumbi kubo ngokuvumela ukuba idatha yakho ihambe "poof" iyakwenza njalo.